kunenkolelo yokuthi iwayini owomile isiphuzo engasekelwa ungeze manzi noma ushukela phakathi abalandeli imikhiqizo winemaking. Professionals babe iziqu zabo. Bona uhlukanise iphutha kuncike esigabeni sokuphothulwa oludakayo ukuvutshelwa inqubo inhlama kanye ukuguqulwa ibe umkhiqizo wokugcina. Ithebula noma iwayini ezomile - kuwumphumela eziyinhloko zomsebenzi ongoti. Kuyinto ngenxa yayo futhi uthole anhlobonhlobo vintage, abavamile kanye ukuqoqwa iziphuzo.
Ngokwe-French usosayensi wemithi Lui Pastera, owayeneminyaka iyahola kwezokugoma eziphilayo, iwayini ezomile iyona enobungane kakhulu, eziwusizo futhi unempilo umkhiqizo. Lokhu isiphuzo yemvelo iqukethe e oyiyo , utshwala ETHYL, ikhiqizwa ushukela yamagilebhisi, iphesenti okuyinto kuhluka abayisishiyagalolunye nane. Ukwakheka kwamakhemikhali iwayini ezomile kukhona umkhiqizo eziyinkimbinkimbi. Ukwengezwa amanzi ETHYL utshwala ziqukethe esibalulekile umzimba amaqembu organic acid, kanye glucose, fructose, amavithamini, ama-enzyme kanye izakhi yezimbiwa.
Kusukela ezikhathini zasendulo, iwayini ezomile Kunconywa njengoba isiphuzo ekwelapheni. Abelaphi belisebenzisa izakhiwo isinqandakuvunda futhi opholile. Basebenzisa ke njengendlela yokuthola Ukuqedwa neminye imithi.
ososayensi Modern wabonisa ukuthi ukwamukelwa unomphela iwayini ezomile, uma kuwukuthi ibanga ezinengqondo, kuvimbela izifo semithambo kanye muscle inhliziyo. Leli khono ihlobene yamagilebhisi isiphuzo equkethe therein izakhi eziphila abakhuthele - kvartsetin nama-flavonoid. newayini elibomvu (dry) unekhono ukuvimbela emdlavuzeni kanye nesifo sikashukela. It kwandisa ezingeni elithwala umoya-mpilo, uyazihlanza igazi futhi kwandisa isikhathi sokuphila. Zonke lezi zinqubo zenzeke sibonga izingxenye asebenzayo isiphuzo, okuyizinto Antioxidants enamandla.
iwayini elomile ihlukaniswa kuye izinhlobo amagilebhisi ezisetshenziswa sokulungiselela yabo. I isiphuzo angatholakala ukuvutshelwa juice Cabernet, Lambrusco, Merlot, Sauvignon, Aglianico, Negretti nabanye. Kulokhu, ochwepheshe baxhumanisa lokho iqembu newayini elibomvu eyomile.
Yokugcina juice ukuvutshelwa umkhiqizo angatholakala izinhlobo emhlophe, ebomvu noma pink. Kuyoba labizwa ngokuthi ezomile iwayini omhlophe kuleli cala nge amajikijolo phambilini wasusa ikhasi ijusi kwadingeka umbala kancane. Kulokhu, izinhlobonhlobo enjalo zamavini, njengoba Riesling, Tokai Vernacha, yamaGreki, Chardonnay, Muscat nabanye.
Okunezinhlobonhlobo iwayini ezomile zihlukaniswe zibe:
1. Ordinary. Abanaso asukume uzizwe ilungele ukusetshenziswa ngokushesha ngemva isuswe izinsalela imvubelo ukuvutshelwa nqubo eqeda ngokuphelele, wenza filtration kanye ukucaciseleka.
2. Vintage. Lezi iziphuzo agcinwa esithile isikhathi esingeqile onyakeni owodwa. Ukwenza idatha iwayini zingaba komunye noma eziningana izinhlobonhlobo zomvini.
Futhi ekugcineni, collectible. Le mikhiqizo ziyadaluleka iwayini esitolo eside.
Izici "eMoscow" yezindiza Russian
Ukwelashwa kwe-osteochondrosis yomgogodla womlomo wesibeletho kuyinhlanganisela ephumelelayo yemithi yendabuko kanye nezindlela zomuntu
Indlela ukupheka irayisi elimhlophe?